SIDA LOO QALAJIYO TUFAAXA GURIGA: TALOOYINKA UGU FIICAN - TAABASHADA TUFAAXA
Ugu Weyn Ee Taabashada tufaaxa
Alaabta lagu qalajiyo guriga
Tufaaxa waxaa ku jira wax badan oo macdanta ah iyo walxo dabiiciga ah kuwaasi oo faa'iidooyin badan u leh jirka bani'aadamka. Waxay hodan ku yihiin birta, fitamiin C
Laakiin, inta lagu jiro kaydinta dheeraadka ah, tufaaxu waxay lumiyaan hantidooda faa'iido leh. Waxaa lagu hayaa miiska, miisaanka la kariyey, ama tufaaxa ayaa la qalajiyey, yaa la qalajiyey.
Tani waxaa laga yaabaa in ay tahay habka ugu waxtarka leh ee laysku hallayn karo ee lagu ilaalin karo dhammaan fitamiinada miro.
Tufaaxu waa siyaabo kala duwan. Tani waxay qallajineysaa qorraxda, foornada, mashiinka dhejiska ama qalajiyaha korantada khudaarta iyo miraha.
Xeerarka qalajinta tufaaxa
Xeerarka aasaasiga ah ee qalajinta waxaa ka mid ah:
Dhammaan qalajiyey, tufaaxa aan joogtada aheyn, waa inay noqdaan kuwo bislaaday, oo lagu xushay cabbirka.
Tufaax dufan iyo tufaax macaan leh ayaa ku habboon qalajinta.
Dhumarka lafdhabarku waa inaan ka badnaan 1 cm.
Dhammaan tufaaxa la jarjaray waa inay ahaadaan dhumuc isku mid ah.
Waxaa lagu talinayaa in la jarjariyo tufaaxa, sidaas awgeed way qallalayaan marka loo eego kuwa lagu jarjarey.
Si ay tufaaxu si siman u qallalan yihiin, waa la dhajiyay si taxadar leh, waa inay noqdaan lakab hal miro ah oo isku xigta, markaa ma wada jirayaan.
Sidaas darteed tufaax ma madow ma ...
Maaddaama tufaaxu aad u hodan yihiin birta, waxay si dhakhso leh u oksidise. Sidaa darteed marka guriga la qalajiyo, tufaaxa la jarjaray ma madow, waa in lagu rusheeyaa biyo qabow oo ku daraya cusbo ama qadar yar oo citric acid ah. Isticmaal 10 rodol oo cusbo ah ama 2 garaam oo acid ah halkii litir oo biyo ah. Miro ayaa markaa hawada la qalajiyaa.
Hab kale oo caan ah waa furan, i.e., goobo la jaray ama xaleef miro ah ayaa lagu rusheeyaa biyo kulul illaa dhowr ilbiriqsi (ku dhawaad ​​90 ° C). Laakiin marka dufan, tufaaxi waayaan sonkorta iyo acid.
Waxaad sidoo kale xajin kartaa maraq tufaax ah oo uumi karkaraya biyaha kareemka adigoo ku ridaya shaandho ama caleen ka hor, ka dibna ku wareeji biyo qabow si aad u qaboojiso. Thanks to nidaamkan, tufaaxu si qoto dheer u qallalan.
Qawaaniinta qabashada Apple
Tufaaxa doofaarka oo dhan, oo dhan, hilib adag oo dhadhan macaan iyo dhanaan, iyada oo aan lahayn qoryaha iyo kallana miro.
Large oo la qalajiyey oo kaliya qaabka la jarjarey, iyaga jarjar xaleefyada iyo wareegyada, ka saar abuurka abuurka. Foosha tufaaxa ah waa la diiray ama ka tagay. Wixii qalajinta, inta badan noocyada xagaaga waxaa loo isticmaalaa, in yar inta badan dayrta.
Tufaax qalalan foornada
Marka ugu horeysa, tufaaxa qalajinta ee foornada ayaa u muuqda sida ugu fudud. Waa hagaag, waa maxay dhibaatada halkan: tufid lagu maydho ama la jarjaray tufaaxa ayaa lagu duubay warqad dubista iyo foornada. Laakiin maya, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso sheyga yar. Waa lagama maarmaan in la xusuusto in midhaha la qalajiyey foorno furan, sababtoo ah foornada waa la xidhay, waxay si dhaqso ah u dubi doonaan.
Waa inuu noqdaa mid lagama maarmaan ah si taxadar leh ula soco xaaladda tufaaxa, sababtoo ah way qalajin karaan ama gubi karaan.
Tufaax, jarjar xaleefyada iyo wareegyada, si siman ku faafaya xaashi dubista, horay u samaysnid xayawaanka.
Dhibicda habkan loo isticmaalo qallajinta tufaaxa, laga yaabee, waxaa lagu magacaabi karaa xaqiiqda taas geeddi-socodku waa mid aad u dheer waxayna qaadataa waqti badan.
Wixii qalajinaya foornada, ma aha noocyo kala duwan oo tufaax ah ayaa loo isticmaalaa.
Iyada oo leh noocyo macaan, qalajinta waa jajab iyo dhadhan.
Tufaax iyo macaan oo dhadhan fiican leh. Inta badan qalajinta delicious waxaa laga helaa kala duwan "Antonovka".
Qallajinta tufaaxa foornada ku dhawaad ​​6 saacadood. Miraha waxaa la isku daraa 40-50 daqiiqo kasta si aad u qalajiso iyaga.
Si dhakhso ah uma geli karaysid foornada heerkul sarre, sida tufaaxu si dhakhso ah ugu dabooli karayaan qolof, iyo dhammaan qoyaanka ay ku jiri doonaan. Albaabka foornada, bilawga geedi socodka waa inuu noqdaa mid dardar leh, isaga oo xirxiran ugu dambeyn, marka biyaha oo dhan ay ku dhowaadan yihiin.
Qalabaynta foornada waxaa caadi ahaan loo qaybiyaa saddex xilli:
Xilliga koowaad, heerkulku waa 50 ° S, albaabka foornadu waa ujir ilaa inta tufaaxu bilaabmayo kuleylka.
Ka dib saacad bilawga hawsha, heerkulku waa la kiciyaa ilaa 70 ° C, badi biyaha ayaa bilaabaya inay ka soo baxaan tufaaxa.
Xilliga ugu dambeeya ee saddexaad waa in kor loo qaado heerkulka ilaa 80 ° C.
Ku qalajinta qalajiyaha
Habka ugu haboon ee qalajinta waa tufaaxa qalajinta ee qalajiyaha korantada. Waxay qaadataa boos yar, waxay u shaqaysaa nafteeda iyo uma baahna joogitaanka joogtada ah, tufaaxu ma daboolan yahay boodh iyo cayayaanka kala duwan.
Tufaaxa la jarjaray ayaa la geliyaa qaybo gaar ah oo qalajiyaha, kadibna waxaa lagu rakibay qalajiyaha korontada laftiisa. Daboolka ayaa xiran oo riixaya badhanka awoodda.
Qiyaastii waqtiga qalajinta waa qiyaastii 6 saacadood. Marka ugu horeysa, heerkulku wuxuu dhigayaa 75-85 ° S, ka dibna waxaa la yareeyaa 50 ° S. Diyaarinta tufaaxu waa sahlan tahay in la go'aamiyo, marka la cadaadiyo, waxay joojiyaan soo saarida casiirka.
Noocyada ugu fiican ee tufaaxa la qalajiyey ee qalajiyaha korontada waxaa loo tixgeliyaa inay tahay dayrta hore: Aport, Titovka dayrta, Pepin, Antonovka. Ha ku talin qalajinta noocyo jiilaalka. Tufaaxyada hoos u dhacay waxay ku siin karaan natiijooyin aad u wanaagsan marka qalajinta. Miraha la qalajiyey ee caleenta ayaa sidoo kale ka yimaada noocyada xagaaga, iyo weliba tufaaxa tufaaxa duurjoogta ah.
Tufaaxa qallalan ee qorraxda
Jiilaalku wuxuu inaga dhigayaa mid ku faraxsan miro cusub, laakiin dhammaanteen naga mid ah ayaan ku noolahay gobollada halkaas oo fiitamiino cusub la cuno sanadka oo dhan. Tani waa waqtiga ugu quruxda badan ee qalajinta. Qalabaynta tufaaxa qorraxda ayaa la tixgeliyaa Qiimo yar oo la awoodi karo qof walba.
Tufaaxa tufaaxa ah ee razlazhivayut oo ku qoran baayacmushtarka, xaashida dubista, ama miiska, kaas oo ku yaal waddada. Waxay ku qallajiyaan saamaynta iftiinka qorraxda, waa inay noqdaan maalin kasta ilaa ay ka qalalan yihiin.
Sidoo kale, tufaaxa ayaa lagu dhejin karaa muraayad oo ku dhegsan, sida garland Christmas, meel qorrax leh. Waxaad sameyn kartaa qalajiyo khaas ah, daboolay faashad ama mesh, sidaa darteed way fududahay in laga badbaadiyo duqsiyada iyo cayayaanka kale.
Ku qallaji qorraxda waxay noqon kartaa kuleyl xagaaga oo keliya.
Maadaama tufaax la qalajiyey xagaaga, noocyada xagaaga ayaa loo isticmaalaa in lagu qalajiyo. Tusaale ahaan, Papirovka, Melba, Borovinka, Riyada. Midhaha ugu qalajisan ee jilicsan ayaa laga helaa miraha cad cad.
Noocida qalajinta ayaa loo tixgeliyaa ugu dheer, maaddaama qalajinta dhameysatay lagu kaydin karo ilaa wiigii, marmarka qaarkood xitaa shan maalmood.
Hababka kale ee qalajinta
Intaa waxaa dheer, qallajinta qorraxda iyo foornada foornada ayaa la qalajiyey microwave iyo kariyaha korantada.
Wixii microwave ah, tufaaxa la kariyey, iyo sidoo kale noocyada kale ee qalajinta, ka dibna waxay ku duuban yihiin saxan, oo hore u daboolay maro suuf ah, oo daboolay kor.
Nidaamka qalajinta oo dhan wuxuu qaadaa 3-4 daqiiqo oo keliya., oo leh awood microwave oo ah 200 watts. Faa'iidooyinka waxaa loo aaneyn karaa xaqiiqda ah in qaybaha waxtarka leh iyo fitamiinada aan si weyn loo burburin oo lagu kaydiyo tiro badan oo ah miraha la qalajiyey.
Malaha qalajinta tufaaxa kariyaha ma aha habka ugu wanaagsan, laakiin waxa la sameeyo haddii ay da'ayaan roob ama aad u buluugay. Caanaha la dubo, ama maacuunta kale ee buluugga ah, ku rid shooladda, oo ku rid foornada leh tufaaxa.
Waqtiga cuntada waa qiyaastii 18 saacadood, waxayna ku xiran tahay nooca iyo dhumucda miro la jarjaray. Waxaad sidoo kale isku dari kartaa laba siyaabood oo tufaaxa qalajinaya. Tusaale ahaan, subaxdii si aad dibadda uga qaadato, iyo fiidkii si aad ugu diyaariso kariyaha.
Sida loo keydiyo tufaaxa
Noocyada noocan ah ee la qalajiyey sida tufaaxa ayaa ugu fiican lagu kaydiyaa meel aan iftiinka qorraxdu hoos u dhicin. Hoyga ama qolalka kaydka ah waa inay noqdaan kuwo qabow oo qallalan, haddii ay qoyaan tahay, qalajinta waxaa lagu dabooli karaa caaryo iyo qoyn.
Waa in si joogto ah loo duubo, oo urta udheer. Ku kaydi miraha la qalajiyey sanduuqyada alwaaxda, sanduuqyada kartoonada, boorsooyinka muraayadaha, dhalooyinka leh dhalada leh jilbaax adag.
Xaashida warqadda wax lagu daboolo ee hoose ee weelka kaydka, waxay nuugaysaa qoyaan ka badan, tufaaxa ka badbaadinta suurtagalka ah. Laga soo bilaabo daboolka sare ee lakabka qaro ee dabaysha dabiiciga ah, sidoo kale ma siinayo fursad ay ku helaan cayayaanka kala duwan.
Ha ku kaydi tufaaxa qalabka balaastigga ah, maadaama aysan u oggolaanin hawada, waxay noqdaan kuwo xoqan oo qoyan, lumiyaan dhadhankooda.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Taabashada tufaaxa 2019